Rahoviana no mivoaka i Rick sy Morty Season 5? Aiza no hijerena, antsipirian'ny streaming, fotoanan'ny rivotra, fizarana ary maro hafa - Pop-Kolontsaina
Rahoviana no mivoaka i Rick sy Morty Season 5? Aiza no hijerena, antsipirian'ny streaming, fotoanan'ny rivotra, fizarana ary maro hafa
Ny Swim olon-dehibe dia nanambara an'i Rick sy Morty Season 5. Farany dia hiverina amin'ny herinandro fahatelo amin'ny volana jona ny seho malaza, ahitana an'i duo Rick sy Morty. Ny fizarana faha-5 dia herintaona katroka aorian'ny nifaranan'ny fizaran-taona farany.
Vakio ihany koa: Titans Season 3 teaser trailer Easter Eggs: The Joker, Red Hood, Scarecrow, ary maro hafa.
Miverina i Rick sy Morty ny alahady izao @adultswim
zavatra tsara indrindra hatao rehefa mankaleo ianao
- Rick sy Morty (@RickandMorty) 18 Jona 2021
Ny meta-comedy nandresen'i Emmy dia navaozina nandritra ny fizarana 80 tamin'ny 2018. Ny fizarana 4 dia nanana fizarana folo mahazatra, izay midika fa 70 ny fizarana sisa tavela. Ny fizarana 5 dia antenaina hanana fizarana folo mahazatra ihany koa. Midika izany fa ireo fizarana sisa tavela dia hanosika ny andiany mankany amin'ny Andiany faha-10, farafaharatsiny.
Ity dia meta eto amin'izao tontolo izao, hoy i Rick Sanchez, ilay mpilalao fahefatra amin'ny rindrina fahaefatra ary nahatsapa tena (tamin'ny fizarana 3 - 1 - The Rickshank Rickdemption):
Raha maharitra vanim-potoana sivy dia tiako ny saosy handroboka McNugget, saosy Szechuan, Morty. Nanampy teny ilay mpilalao, vanim-potoana sivy hafa mandra-pahatongako ny saosy Szechuan mandroboka. Inona iny? Mandritra ny 97 taona fanampiny, Morty! Tiako ilay saosy McNugget, Morty.
Vakio ihany koa: Fortnite: ny hoditra Rick & Morty dia mandefa ny Internet ho korontana.
‘Rick and Morty’ dia hiverina hampiala voly ireo mpankafy ny 20 jona (alahady) amin'ny 11 ora alina. EST / PDT na 10 alina Fotoana foibe
Ny fizarana voalohany amin'ny premiere dia mitondra ny lohateny hoe 'Mort Dinner, Rick Andre.' Ity fizarana ity dia hahita an'i Rick miomana amin'ny sakafo hariva izay anasany ny nemesis monina an-dranomasina, Andriamatoa Nimbus.
'Rick and Morty' dia mandeha amin'ny Swim olon-dehibe. Mampalahelo fa tsy misy safidy hafa amin'ny fijerena ireo fizarana rehefa mandeha izy. Na izany aza, ny fizarana taloha amin'ny fampisehoana dia hita ao amin'ny Hulu sy HBO Max. Ny fizarana teo aloha dia misy amin'ny Amazon Prime, Sling TV, ary YouTube TV.
Mbola tsy misy teny ofisialy momba ny famotsorana ao amin'ny Netflix. Na izany aza, andrasana hilatsaka afaka roa volana ny vanim-potoana iray manontolo.
Zahao ny horonan-tsary mozika 'Oh Mama' nataon'i Run The Jewels izay mampiseho an'i Rick And Morty.
ny fomba famelana heloka sy fitokisana indray
Hatreto dia ny lohatenin'ireo fizarana telo voalohany ihany no voamarina, miaraka amin'ireo daty namoahana azy ireo. Rick sy Morty fizarana 5 fizarana 1 dia hilatsaka amin'ny 20 Jona (Alahady).
Ny fizarana 2 (‘Mortyplicity’) dia hilatsaka amin'ny 27 jona (alahady) ary ny fizarana 3 (A Rickconvenient Mort) dia hidina amin'ny 4 jolay (alahady).
Na dia tsy voalaza aza ny daty sy ny fizarana hafa dia antenaina fa halefa amin'ny alahady tsy misy banga.
Vakio ihany koa: Loki Episode 1 sy 2 Breakdown: atody Paska, teôria ary inona no antenaina.
inona ny zavatra sasany tokony hohafanaina
inona no atao hoe tononkalo momba ny fahafatesana
ny fomba hifandraisana amin'ny lehilahy tsy mety
aza avela hisy fiantraikany eo aminao ny tenin'ny olona
vince mcmahon mandatsa-dranomaso ny quadany roa